3700 उडान भन्दा पहिले ब्रह्मांडिक शरीरको विस्फोट! | Suenee Universe
3700 उडान भन्दा पहिले ब्रह्मांडिक शरीरको विस्फोट!
6 6028x 27। 12। 2018 1 रिडर
पुरातत्वविद्हरूका अनुसार, एक ब्रह्मांडिक विस्फोटको प्रमाण फेला पर्यो, एक उल्का वा कम्युनिस्ट मध्य पूर्वको लगभग 3700 उडानहरूमा विस्फोट भयो। त्यहाँ एक सिद्धान्त हो कि यो विस्फोटले मृत सागरको उत्तर, मध्य हायर भनिने सम्पूर्ण क्षेत्रमा मानवतालाई समेट्यो।
ओरिएंटल रिसर्चको अमेरिकन स्कूलहरूको वार्षिक बैठकमा वैज्ञानिकहरू (14 - 17.11.2018) ले निम्न अवस्थालाई वर्णन गरे:
"विस्फोटले तुरुन्त सबै चीजलाई 500 स्क्वायर माइलेजमा नष्ट गर्यो। यो न केवल शहरहरु, तर पनि प्रजनन मिट्टी, र प्रभावकारी लहरमा मुस्कुराए पछि मध्य घो चमकदार ब्रह्मा को एक एहाइड्राइड मिश्र को नमक र मृत सागर सल्फेट देखि। पुरातात्विक प्रमाणको आधारमा, कम से कम 600 वर्ष लाग्न थालेको पर्याप्त क्षति र मिट्टी प्रदूषण र पूर्वी मध्य पूर्व सभ्यता को पुनर्स्थापित गर्न। "
एक विनाशकारी स्थानहरु टाल अल-हम्माम थियो, जो एक पुरानो शहर थियो जुन 36 हेक्टेयर प्रायः थियो।
साक्ष्यहरूले वैज्ञानिकहरूले विस्फोट पत्ता लगाएपछि, 3700 टाल एल-हम्ममको पुरानो सिरेमिक, एक असामान्य उपस्थिति हो। सिरेमिक्सको सतह लुटेको थियो (गिलासमा परिवर्तन भयो)। तापमान सेरामिक्स मा जिक्रोन को भागहरु ग्याँस मा गरिएका भनेर उच्च थियो - यो 4000 अधिक डिग्री सेल्सियस को एक तापमान आवश्यक छ, फिलिप सिल्भियाको क्षेत्र पुरातत्वविद् र अग्लो एल-हैमम को साइट प्रबन्धक बताए। बलियो गर्मी लामो पर्याप्त सारा बर्तन बाल्न पछिल्लो थिएन, सतह अन्तर्गत सेरामिक्स भाग अपेक्षाकृत undamaged थियो।
एल-हम्ममलाई यमनमा भन्नुहोस् - नयाँ अनुसन्धानले बताउँछ कि शहर र वरपरको क्षेत्रले 3700 (© फिलिप सिल्भिया)
कहिले काँही यस्तो साइबेरिया मा Tunguska मा 1908 विस्फोट जस्तै, पृथ्वी इतिहास समयमा भयो भन्ने कुरा - सिल्भियाको द्वारा भन्यो, यस्तो असामान्य क्षति aboveground विस्फोट हुन सक्छ कि एक प्राकृतिक घटना कस्मिक शरीर छ। प्रभावित पुरातत्व को अन्य शहरहरु मा पुरातात्विक उत्खनन र सर्वेक्षण पनि 3700 भन्दा पहिले अचानक जीवन को अचानक विनाश को संकेत गर्दछ, सिल्विया को पुष्टि। अहिले सम्म कुनै क्रेटरहरू फेला परेनन्। यो स्पष्ट छैन कि अपराधी एक मौसम अथवा एक भूतपूर्व भूकम्प थियो जुन जमीन माथि विस्फोट भयो।
सिल्भियाले भने, यो तथ्य यो हो कि केवल 500 वर्ग किलोमिटर किलोमिटर नष्ट भएको बताइएको छ कि विस्फोटले निम्न उचाइमा घटेको छ, सम्भवतः3किलोमिटर भन्दा तल रहेको होइन। तुलनाको लागि, टंगस विस्फोटले माटोको 2150 वर्ग किलोमिटरमा गम्भीर असर पारेको छ। परिणामहरू प्रारम्भिक छन् र अनुसन्धान चलिरहेको छ, सिल्भियाले जोड दिए। टीममा ट्रिनिटी साउथ वेस्टर्न युनिवर्सिटी, उत्तर एरिजोना विश्वविद्यालय, डेलुल विश्वविद्यालय, एलिजाबेथ सिटी स्टेट यूनिभर्सिटी, न्यू मेक्सिको टेक, र कम्युट रिसर्च समूहबाट शोधकर्ताहरू छन्।
टैग: ब्रह्मांड, शिक्षा, जीवन
6 टिप्पणीहरू "3700 उडान भन्दा पहिले ब्रह्मांडिक शरीरको विस्फोट!"
मार्टिन होरेस भन्छन्:
मा 28.12.2018 19: 39
मा 29.12.2018 17: 27
मसँग सहमत छु। ती शहरहरु को विनाश को लागि क्षुद्रग्रह जिम्मेदार जस्तो देखिन्छ।
मा 30.12.2018 12: 26
यी शहरहरू को बासिन्दा दिइएको थियो अनैतिक pokleskům कसरी तिनीहरूले देखे म निर्माताहरू दोष छैन।
धेरै राज्य र पनि जाँच्न आए जो विदेशी दूत अप खडा। शहर दण्ड, सदोम को मानिसहरू तिनीहरू पुरानो नियमको सहवास को अर्थ "थाहा" सकून्, आफ्नो रिलीज माग।
मा 01.01.2019 01: 36
खैर, वा त्यहाँ त्यहाँ, क्षुद्रग्रह गिरिएको छ किनकि यो सयौं वा लाखौं वर्ष पहिले हाम्रो गुरुत्वाकर्षण अन्तरक्रिया द्वारा निर्देशित गरिएको छ। यो अझै पनि भइरहेको छ, केवल मंगल वा चन्द्रमाको सतहमा हेर्नुहोस्, जहाँ प्रभावहरूको निशान एक लामो समयसम्म देखिने छ।
PS: मार्टिन, तपाईं पृथ्वी मा एक विशेष स्थान मा जमीन को क्षुद्रग्रह प्रत्यक्ष गर्न को लागी कितना समय लाग्छ? के तपाईं पक्का लेखेका छौं कि हामीले दशौं दशकका लागि केहि आदेशमा रहेको कुराको अर्थ बनाउनको लागी हो?
मा 01.01.2019 01: 39
यद्यपि दशकौंमा यो बदला / उपाय पहिले देखि नै ठंड हुन्छ ...। :-)
मा 01.01.2019 11: 48
दुर्व्यवहार र रेजिस्टहरू (सोमोम र गोरोरा) ब्रह्मामा कुनै ठाउँ छैन।
मृत समुद्र क्षेत्रको बारेमा सोच्नुहोस् ... हम्म :-)
क्षुद्रग्रहको दिशाको बारेमा तपाइँको दोस्रो प्रश्नको रूपमा।
यदि उच्च खुफियाले चन्द्र सिर्जना गर्न सक्छ भने, उदाहरणका लागि, उडान बोल्डर निर्देशन गर्नु सबै भन्दा आसान हुनेछ।
म तिमीलाई म्यानपावर म्यानमा लिन चाहन्छु, त्यहाँ सम्बन्धित कागजात खोज्छु, र जवाफहरूले तपाईंलाई देखाउनेछ, तर तपाईको शंकास्पद संग ... तपाइँ मलाई थाहा छ कि मेरो विचार कसरी समाप्त गर्नुपर्दछ।